Biyyoonni Afriikaa Kanneen Qe’ee ofi Irraa Buqqa’an Kunuunsuu Qabu: Fannoo Diimaa
Afriikaan uummata biyya ofii keessatti qe’ee ofii irraa godaani miliyoona 13 ta’u qabdi. Kunis guutummaa addunyaa irraa uummata biyya isaa keessatti qe’ee ofii irraa godaane keessaa harka sadii yoo ta’u baqataa ardittii dacha lamaan caala.
Baqataan daangaa qaxxaamuree ennaa godaanu, kan biyya isaa keessatti qe’ee isaa irraa godaane immoo biyyuma ofii keessa ture.
Hoogganaan komiishina gamtaa Afriikaa kan dhimmootii gargaarsa namoomaa, baqattootaa fi uummata qe’ee ofii irraa godaanee Olabisi Dare akka jedhanitti haalli uumati Afriikaa keessaa biyya ofii keessatti qe’ee irraa godaanee hedduu cimaa, yaaddessaa fi hammaataa adeeme.
Dhimmootiin biyya ofii keessatti qe’ee ofii irraa godaanuu heddummaachaa guyyuma guyyaan hammaataa adeeme.
Dhimmootii ijoo ta’an keessaa hangi tokko yeroon isaa dheerataa dhufe. Kan nuti dubbataa jirru qe’ee irraa buqqa’uu biyyoota kan akka Sudan, Somaaliyaa, Republikii demokraatawaa Koongoo-faa ti. Yeroo hanga tokkoof walitti bu’iinsi sababaa qabbanaa’eef lakkoobsi kun gad xiqqaatee ture.
Haalawwan harawaan uumamuu isaatiin immoo deebi’ee ol ka’e. kun immoo haala kan akka Boko Haram, naannoo Saaheelii fi ka Maalii keessaa ti jedhan.
Galaana Somaaliyaa Irratti Butinsi Dooniilee Deebi’ee, Sa'atiilee 48 Keessatti Dooniilee Lamatu Butame
Qorattoonni Raashiyaa Nama Kaleesa Boombii Dhoose Lubbuu Namootaa Galaafate Adda-Baafachuu Dubbatan
Siiriyaa Keessatti Har'a Haleellaa Gaazii Summiitti Shakkamuun Namoota Kurnaan Lakkaawamantu Dhume
Bulchiinsi Pirezidant Traamp 'UN Population Fund' Irraa Baajeta Doolaara Miliyoona 30 Olii Kute
Mukii baala baase.Cheeriin daraare fooleen qilleensaa urgoofte.Nama miliyoona hedduutti Washington, DC daawwachuutti jira
Aangawoonni Somaaliyaa Keessaa Hojjetoota Jaarmayaa Fayyaa Addunyaa 5 Al-shabaab Butuun Shakkame Barbaaduu Itti Fufanii